धुम्रपान र तंबाकू क्रेभिंगहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने - 802०२ क्विट
घर » Vermonters » क्विट जारी » Cravings कसरी प्रबन्ध गर्ने
कसरी बन्धनहरू प्रबन्ध गर्न सकिन्छ
निकोोटिन फिर्ती कति लामो हुन्छ? पहिलो दुई हप्ता सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। तपाईंको अनुकूलित छोड्ने योजना, तपाईंको डाक्टरको सहयोग, 802०२ क्विट्स फोन वा व्यक्ति-व्यक्ति छोड्ने कोच र तपाईंको समर्थन नेटवर्कको थप समर्थन तपाईंको समर्थनको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने मार्फत जान तयार भइरहेको छ। प्रत्येक छोड्ने अनुभव फरक महसुस गर्दछ; यो अरु भन्दा कती मानिसहरुको लागी कठिन हुनेछ। यदि तपाईंले विगतमा एउटा दृष्टिकोण प्रयास गर्नुभयो र यसले काम गरेन भने, अर्को प्रयास गर्न विचार गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रयासले तपाइँले के सिक्नु भएको छ भन्नेमा बनाउँदछ र तपाइँलाई सफलताको नजिक पुग्छ।
तपाइँ तपाइँको छोड्ने मितिमा कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? के तपाईं ओछ्यानबाट बाहिर उफ्रनुहुनेछ, तपाईंको नयाँ सुर्तीजन्य मुक्त जीवन सुरु गर्न उत्सुक? वा छोड्ने विचार केवल एक सपना मात्र हो भन्ने आशा गर्दै तपाइँ आवरणहरूमा लुक्नुहुनेछ? जे भए पनि, यो कुरा जान्नमा गर्व गर्नुहोस् कि जब तपाईं आफ्नो छोड्ने दिनमा उठ्नुहुन्छ, तपाईं अब आधिकारिक रूपमा सुर्तिजन्यमुक्त हुनुहुन्छ।
तपाईं सायद सिगरेट र अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनहरू रोक्न कसरी सोचिरहनुभएको हुन सक्छ। यहाँ सिगरेट र ई-सिगरेट cravings र अन्य सुर्ती धूम्रपान को प्रबंधन को लागी केहि सुझावहरु छन्।
तपाईंको छोड्ने दिनमा, तपाईं द्रुत जाँच गर्न चाहानुहुन्छ तपाईको सबै सुर्तिजन्य समाप्त भएको छ। त्यसो भए, छोड्ने तपाईंको कारणहरूमा गएर तपाईंको दिन सुरु गर्नुहोस्। अर्को राम्रो विचार सँगै "तनाव राहत थैली" राख्नु हो। यसमा तपाईले कडा क्यान्डी, टकसाल, पिउने स्ट्रफ वा कफि स्ट्रेमर, स्ट्रेस बल वा अरू केही तपाइँको हातलाई व्यस्त राख्नको लागि, आफ्नो प्रियजन वा पाल्तु जनावरको चित्र वा बच्चाबाट एउटा नोट वा आफैंबाट तपाइँ राख्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं ती लालसा प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंले साधारणतया धुम्रपान गर्ने, चाउने वा भेप गर्ने ठाउँहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई एकपटक छोड्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई प्रलोभित रहनबाट जोगाउन र सिगरेट, ई-सिगरेट वा अन्य सुर्तीजन्य लालसाहरूको प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यस दिनको लागि, अर्को दिनको लागि बनाइएको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु हो र जबसम्म तपाईंलाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको चाहानाको प्रबन्धन गर्न सजिलो हुँदैन सम्म तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। तपाइँलाई समय र परिस्थितिहरू थाहा छ जुन तपाइँले सुर्तीजन्य प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तर अबदेखि तपाइँ तपाइँले आफ्नो समयको छाँटकाँट योजना त्यस समयमा पार गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो महसुस गर्दा - सजिलो सास र अधिक ऊर्जा भएको - केही दिनहरूमा देखा पर्दछ, यसले छ महिनासम्म लिन सक्दछ तम्बाकूमुक्त महसुस गर्न। वास्तवमा, छ महिनामा सुर्तीजन्य रहनु छोड्नुको लागि माइलस्टोन हो।
कार्य रणनीतिहरू चीजहरू हुन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई आकांक्षा प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। पहिले जान्ने कुनै तरिका छैन जुन तपाईंको लागि कार्य गर्दछ, त्यसैले उत्तम छनौटहरू पाउन उत्तम हो। तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि केहि परिस्थितिहरूमा अरु भन्दा राम्रो काम गर्दछ। निश्चितको लागि थाहा पाउनको लागि मात्र तरिका उनीहरूलाई प्रयास गर्नु हो।
कार्य रणनीतिहरू छान्दा अनुसरण गर्न तीन सरल नियमहरू छन्:
1.यो गर्न सजिलो हुनुपर्दछ। यो सजिलो छ, अधिक संभावना तपाईं यो गर्नुहुनेछ।
2.यो रमाईलो कुरा हुनुपर्दछ। यदि यो अप्रिय छ, संभावना छ कि तपाइँ यो गर्न चाहनुहुन्न!
3.तपाईले रोज्नु भएको कार्य रोक्नु पर्छ वा कम्तिमा तपाईको चाहना कम गर्नु पर्छ। यदि यसले सिगरेट वा ई-सिगरेटको लागि तपाइँको लालसालाई कम गर्दैन भने, सुर्तीजन्य सुर्ती वा सुगन्ध वा भ्याप, तपाइँले अरू केहि खोज्नु पर्छ जुन चाहिन्छ।
कार्य रणनीतिहरूको उदाहरण कोशिस गर्न:
4Ds अभ्यास गर्नुहोस्। एक DEEP सास लिनुहोस् वा २ एक गिलास पानी पिए। अरू केहि गर्नुहोस्। १० मिनेट को लागी DELAY।
अन्य केटर्सहरूसँग जोड्नुहोस् जुन तपाईंलाई के हुँदैछ जान्नुहोस्।
आफु आफैलाई अव्यवस्थित गर्नुहोस् जबसम्म तृष्णा समाप्त हुँदैन। प्रायः तृष्णाहरू केवल -3--5 मिनेट मात्र हुन्छन्। तपाइँ त्यो समयको लागि केमा रमाईलो गर्नुहुन्छ? तपाईंले बचत गरिरहेको पैसाको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईं के खरीद गर्न सक्नुहुन्छ? पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? मनपर्ने युट्यूब भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ? थप विचारहरूको लागि तल हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं आफूलाई निको पारेर त्यो निकोटीन निकासी तृष्णाको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि एक कदम नजिक हुनुहुन्छ। जब तपाइँ एक पटकमा-मिनेटको उपलब्धिको रूपमा छोड्ने बारे सोच्नुहुन्छ, यो प्राप्त गर्न अलि सजिलो लाग्न सक्छ।
तपाईंको पुरानो पाठ सन्देशहरू मेट्नुहोस् वा तपाईंको फोनको ठेगाना पुस्तिका अपडेट गर्नुहोस्।
तपाईंको कम्प्युटर वा फोनबाट पुरानो ईमेलहरू मेटाउनुहोस्।
आफ्नो शर्ट वा जुत्ता परिवर्तन गर्नुहोस्। यो सानो कार्यले तपाईंलाई पुनःसेट गर्न र राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
पिंग पong बल र रबर ब्यान्ड बोक्नुहोस्। यो मूर्ख आवाज हो, तर पिंग पोंग बल वरिपरि त्यो रबर ब्यान्ड लपेट्न को लागी लाग्ने को लागी सजीलो सजिलो छैन, र यो एक तृष्णा बित्न सम्म तपाईं व्यस्त रहन्छ।
तपाईं काममा हुनुहुन्छ भने भुँडी वा भवन वरिपरि हिड्नुहोस् — यसलाई धूम्रपान नगरेको ब्रेकको रूपमा सोच्नुहोस्।
कारलाई कार धुनेमा लैजानुहोस् वा भित्री खाली गर्नुहोस्।
दाँत माझ्नुहोस् र दाँत राख्नुहोस्। यसले तपाईंको दिमागलाई तृष्णाबाट हटाउन मद्दत गर्दछ, र तपाईंले ताजा सास पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ!
कम्तिमा songs गीतहरू उनीहरूको नामको साथ सोच्नुहोस्।
सूर्यफूलको बीउ स्नैक्स ब्रेक लिनुहोस् those ती शेल्फहरू मार्फत काम गर्नु चुनौती र minutes मिनेट खर्च गर्ने स्वस्थ तरीका हुन सक्छ।
सुन्तलाको बोक्रा ताछ्नुहोस् तपाईलाई यो खाए जस्तो लाग्दैन। यो सबै सेतो सामान बन्द गर्न केवल minutes मिनेट लाग्छ।
जब तृष्णा हिट हुन्छ, विश्रामगृहमा जानुहोस्, आफ्नो हात धुनुहोस् र ऐनामा आफूलाई हेर्नुहोस्। जब तपाइँ सिगरेट ब्रेकको लागि तयार हुनुहुन्छ, लालसा वास्तवमै सकियो।
व्याकुल पोटीन वा चिन्ताको ढु stone्गासँग खेल्नुहोस् जब तपाई एउटा लालसा मार्फत काम गर्नुहुन्छ तपाईका हातहरूलाई व्यस्त राख्न।
द्रुत हिड्नुहोस् र तपाईंको बाटोहरू गन्ती गर्नुहोस्, र हेर्नुहोस् यदि तपाईं दिनदिन केही थप गर्न सक्नुहुन्छ।
घरको चारैतिर सफा गर्नुहोस् वा कोठामा टेकल गर्नुहोस्। बोनस: कुनै सिगरेट छैन र ताजा, निष्कलंक घर।
सोलिटेयर वा अर्को खेल खेल्नुहोस् यदि तपाईं कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने, तर होईन यदि तपाईंको कार्यस्थलले यसलाई अनुमति दिदैन भने!
4Ds अभ्यास गर्नुहोस् ... DEEPLY सास लिनुहोस्। एक गिलास पानी पिए। अरू केहि गर्नुहोस्। १० मिनेट को लागी DELAY।
तपाईंको आफ्नै ध्यान भंग र ब्यवस्थापन प्रबन्ध गर्न सुझावहरूको सूचीको साथ आउनको लागि दिनको समयको बारेमा सोच्नुहोस् जब तपाईं सिगरेट वा ई-सिगरेट चाहानुहुन्छ, सुर्तीजन्य सुगन्धित चीज वा ना or्गो च्याप्टाउनुहुन्छ र सब भन्दा बढी टिप मिलाउनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं सँधै कारमा बत्ती बाल्नुहुन्छ भने, यसको सट्टा रेडियो खोल्नुहोस् र गीतको साथ गाउनुहोस्। प्रायः गीतहरू five देखि minutes मिनेटमा हुन्छन्। एक पटक तपाईले सक्नु भएपछि तपाईको चाहना हराउनु पर्छ।